Qaababka Wareegga Shabakada - Khabiirka Cilmiga ah
. Iyada oo la kordhinayo, waxaad abuuri kartaa khariidadda goobta ama qorshaha, taas oo muujinaysa habka ugu haboon ee loo socdo goobta iyo xogta laga soo qaado.
Ka dib markii aad kaadhadhkaaga boggaaga, Web Scraper wuxuu ku sii wadi doonaa bogga bogga ee bogga kaddib iyo xoqidda waxyaabaha loo baahan yahay. Xogta la bixiyay waxaa loo dhoofin karaa CSV ama qaabab kale. Ka sokow, kordhintaan waxaa lagu dhejin karaa dukaamada Chrome iyada oo aan wax dhibaato ah - how to make a logo for free app.
Qaar ka mid ah sifooyinka bogga Wareegga ayaa lagu qeexay midigta hoose
Awoodda lagu xoqayo bogag badan
Qalabku wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro macluumaadka dhowr bogagga shabakada si siman haddii ay ku qoran tahay bogagga bogagga. Haddii aad u baahatid inaad sawirrada ka soo qaadatid bogga internetka 100-aad, waxaa laga yaabaa inaad waqti ku qaadato si aad u hubiso mid kasta oo ka mid ah bogagga oo aad ogaato kuwaa ku jira sawirada iyo kuwaa kuwa aan qabin. Sidaas, waxaad ku bari kartaa qalabka si aad u eegto bog walba sawirada.
Qalabka wuxuu ku keydiyaa xogta CouchDB ama kaydka agagaarka goobta
Qalabkuna wuxuu ku dukaamaystaa sitemaps iyo xogta la soo saaray oo ku jira kaydinta gudaha ee browser ama CouchDB
Maaddaama qalabku ka shaqeyn karo noocyo kala duwan oo xog ah, dadka isticmaala waxay dooran karaan noocyo badan oo xog ah si loogu soo saaro isla bogga. Tusaale ahaan, waxay xoqin kartaa sawirrada iyo qoraalka labadaba bogagga shabakadda isla markiiba.
Xogta ka soo duuban boggaga firfircoon
Awoodda lagu eegayo xogta la hayo
Qalabku wuxuu u oggol yahay dadka isticmaala inay eegaan xogta la xoqay xitaa ka hor intaan lagu badbaadin goobta loo qoondeeyey
Macluumaadka la soo saaro sida CSV
Web Gacanta ayaa laga dhoofiyaa xogta sida CSV-ga, laakiin sidoo kale waxay u dhoofin kartaa qaabab kale .
Badeecadaha la soo dhoofiyo iyo soo dhoofinta
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad isticmaasho goobo sitoos ah marar badan si ay qalabku u soo dhoofiso oo u dhoofiso agagaaraha codsiga
Browser-kambiyuutarka oo kaliya
Nasiib darro, tani waa mid dhib badan oo faa'iido leh, waxay si gaar ah ula shaqeysaa shabakadda Chrome
Qalab kale oo xogta qalabaysan
Qaar ka mid ah qalabka wax lagu tirtiro oo sidoo kale adiga waxtar kuu leh .. Qaar ka mid ah kuwan hoos ku qoran:
Nidaamkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoqo dhammaan Mawduucyada ku qoran boggaaga. Maqnaanshaha mawduucan ma aha shaqadeeda oo keliya, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tijaabinta automated, kormeerka, macdanta xogta, gariirinta webka, sawirada jarista, iyo ujeedooyin kale.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Wget si aad u ogaato kufsi bogga oo dhan si fudud. Laakiin waxaa jira wax yar oo dhibcood leh qalabkan, ma kala saari karo faylasha CSS.
3. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa amarka soo socda si aad u xoqdo waxyaabaha ku jira boggaaga ka hor intaadan kala jajabin: